BancaNEO - UHLELO LOKUSEBENZA OLULODWA, ZONKE IZINTO IMALI
Ibhange langempela ngqo ku-smartphone yakho
I-Digital Banking Yenziwe Yalula
Ngaphandle kwemali engenayo noma izidingo zediphozithi, BancaNEO yi-akhawunti yasebhange yabo bonke. I-akhawunti eyodwa, ikhadi elilodwa, uhlelo lokusebenza olulodwa.
Vula i-akhawunti yomuntu siqu
Vula i-Akhawunti Yebhizinisi
Ukubhenka Komuntu Siqu Nebhizinisi, kutholakale kalula
Safe & Umsindo
Ukuvikelwa kwezimali usebenzisa i-3D ephephile ne-2FA
Faka isicelo se-akhawunti yebhizinisi noma yangasese
Phatha amakhadi ngaphakathi nohlelo, ngokuthepha nje
Ayikho imali engenayo noma izidingo zediphozithi
Beka imali ezandleni zakho
Landelela imali yakho yonke endaweni eyodwa futhi wenze ukusebenzisa kwakho kwansuku zonke kungabi nazihibe.
Vula i-akhawunti yakho yomuntu siqu
Uhlobo olusha lwebhange
Hlola amandla okubhanga okulula nokuhlakaniphile ku-inthanethi.
Ukushintshaniswa kwemali okusheshayo
Dala i-akhawunti ngokusitshela ukuthi ungubani;
Landa uhlelo lokusebenza kusuka ku-Apple App Store noma ku-Google Play Store;
Qinisekisa ukuthi ungubani ngokurekhoda ividiyo emfushane yesithombe ozishuthe sona futhi uthathe isithombe se-ID yakho.
Qonda indlela osebenzisa ngayo imali kangcono
Isikhombimsebenzisi esibonakalayo enembile	Yenza futhi ulandelele ukusebenza kwakho kwezezimali ngokuthepha komunwe wakho, 24/7.
I-IBAN yemali eningi	exhumene neyakho BancaNEO I-akhawunti ikuvumela ukuthi usebenzise imali kwamanye amazwe ngezinhlobo zemali ezingama-38, ngaphandle kokuvula ama-akhawunti ahlukene awodwa.
Safe & Umsindo	Izici zokuphepha ezihlakaniphile zokugcina imali yakho iphephile. Sithobela izindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphepha ze-EMI ukuze sigcine imali yakho nedatha yomuntu siqu iphephile.
Ukwesekwa okumangalisayo nokunobungane
Cha, iSilicon Valley - izimbungulu azizona izici. Xhumana nenkinga yezobuchwepheshe, yabelana ngempendulo yakho noma usibuze ngendawo yethu yokudla kwasemini esiyintandokazi e-Miami. Sikhona noma kuthiwani.
Bheka izindaba zempumelelo zamakhasimende ethu
Ibhange elihle kakhulu ongabhekana nalo. Bonke abasebenzi bangochwepheshe kakhulu futhi banolwazi. Ulwazi lwabo lokubhanga ku-inthanethi lulula futhi lunobungane.
Siyabonga kakhulu ethimbeni lesevisi yamakhasimende BancaNEO ngokwenza le nqubo ibe lula!
Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngosizo olunikezwa isevisi yamakhasimende ku BancaNEO!
Noma kunini lapho nginombuzo noma ngidinga usizo olwengeziwe, ngiyakwazi ukuthintana nomuntu othile futhi ngithole impendulo ngokushesha. Ngibe nesipiliyoni esihle kuleli sonto futhi bengifuna ukwabelana.
Ihlathi ngenkathi uthenga!
Ku-akhawunti yasebhange ngayinye evuliwe, BancaNEO utshala isihlahla
Guqula konke okwenziwayo wenze isenzo esihle
Sisebenza nozakwethu abaphambili bokutshalwa kabusha kwamahlathi emhlabeni jikelele
BancaNEO sebenzisana ne-Tree-Nation eyikhaya lamaphrojekthi wokutshala angama-90 avela emazweni angama-33 ahlukene.
Izihlahla eziyi-184 673 ezitshalwe eKenya
Izihlahla ezingama-42 336 ezitshalwe eMadagascar
Ziyi-163 710 izihlahla ezitshalwe eBurkina Faso
Izihlahla ezingama-47 485 ezitshalwe eColombia
Izinsiza zokukugcina unolwazi
Funda BancaNEO Blog
Isivumelwano samaqhinga phakathi kweqembu lami le-My NEO kanye ne-Crypto Expo Milano
Iqembu lami le-NEO limemezela isivumelwano samasu ne-Crypto Expo Milan (CEM), umcimbi onikezelwe ku-Blockchain, i-Crypto, i-Ecosystems De.fi, i-NFT, i-Metaverse ne-Web 3.0, ezokwenzeka eMilan kusukela ku-23 kuya ku-26 Juni 2022. I-CEM ithuthukisa ulwazi lwe-internaNonal Crypto Community futhi ihlanganisa izingqondo ezihlakaniphile, izinhlobo ezinkulu, abashintshi begeyimu, abadali, abatshalizimali ...
Izoba yini "into enkulu" elandelayo kwezezimali ngo-2022?
Sithi izinkokhelo ze-biometric. Unyaka ka-2021 uletha izinguquko ezibalulekile ezinsizeni zezezimali ngokuya ngedijithali. Amakhasimende aya ngokuya ancika kumasevisi aku-inthanethi nakubuchwepheshe obuqondene nomuntu siqu, okusiza amabhizinisi ukuthi andise izethameli eziqondiswe kubo futhi akhule ngokushesha. Ngokusho kochwepheshe, imakethe yezinsizakalo zezezimali izofinyelela ku- $ 26.5 trillion ngo-2022.
I-FORBES - IMickael Mosse Ukuzibophezela Kwezokulwa Nokuqalwa Kwamabhange Oku-inthanethi nge BancaNEO
Usomabhizinisi osemusha ongumFulentshi uMickael Mosse uhola inhlangano yesimanje esiza abantulayo kanye nokuhlinzeka ngezinsizakusebenza zezezimali ezihlukile kumabhizinisi. “Besingazimisele ngokwakha ibhange. Sizimisele ukwakha umhlaba ongcono. Lokho kungasho imali eningi ephaketheni lakho - namandla engeziwe okwenza okuhle ezandleni zakho ”…
Usacabanga ukuthi konke ukushintshaniswa kwemali kuyefana?
Thuthukela kuzilinganiso eziguquguqukayo kanye nendlela ehambisanayo, ngokusekelwe enanini nemvamisa yemisebenzi yakho. Jabulela ukuncintisana okukhulu kwamanani ngenxa yobudlelwano bethu nabahlinzeki abaningi. Izinhlobo zemali esisekela ukudluliswa kwezimali eziningi okwenziwe kwaba lula I-IBAN yemali eningi exhunywe ku-akhawunti yakho ye-Satchel ikuvumela ukuthi wenze imali kwamanye amazwe ngezinhlobo zemali ezingama-38, ngaphandle kokuvula ngokwehlukana ...
ABABAMBI BETHU NOKUHLANGANISA
IFIKE KU-40% IMBUZO YEMALI
Joyina i-NEO CIRCLE
Qala uhambo lwakho oluya enkululekweni yezezimali namuhla.
JOYINA I-NEO CIRCLE MANJE!